people Nepal » तीन दिनभित्र देउवा प्रधानमन्त्री ! तीन दिनभित्र देउवा प्रधानमन्त्री ! – people Nepal
१८ जेठ, काठमाडौं । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको ७ दिनको समय सकिएपछि अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने भएका छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको दौडमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेको छैन । तर, देउवालाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न दिने सोचमा पनि एमाले छैन । निर्वाचन अगाडि सरकार गठन हुन नदिन एमाले कम्मर कसेर लागेको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपछि अब यसैलाई कारण देखाउँदै एमालेले संसद अवरुद्धलाई निरन्तरता दिन थालेको छ ।
यही कारणले आजबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि देउवा अब तीन दिनभित्र प्रधामन्त्री बल्लान् की नबन्लान् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसअघि केपी ओलीले राजीनामा गरेको १० दिनभित्र प्रचण्ड बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिसकेका थिए । तर, के देउवा पनि यसरी नै समयमैं प्रधानमन्त्री बल्लान् की नबन्लान् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
बुधबार जस्तै बिहीबार पनि एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । भरतपुरको विषय टुंगो नलागेसम्म देउवालाई सहजै प्रधानमन्त्री हुन दिने पक्षमा एमाले छैन ।
एमालेले भरतपुरको विषयलाई इगो नै बनाइसकेको छ । उसले प्रष्टै रुपमा भरतपुरको विषय नटुंगिंदासम्म संसद चल्न नदिने बताइसकेपछि माओवादीको समर्थनमा देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना केही दिन पर धकेलिने निश्चितजस्तै छ ।
आयोगले पुनः मतगणना गर्ने वा मतदान गर्ने टुंगो नलगाएसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने नखुल्ने भएको हो ।
राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रक्रियाको लागि आह्वान गरिसकेकी छिन् । यस्तो हुँदा अबको तीन दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । तर, एमाले भरतपुरको विषयमा आएको निर्णयपछि लिने बाटोेले देउवा कहिले प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।